के करिश्मालाई उपाधिको आवश्यकता छ ? के करिश्मा मानन्धर आफैमा ब्रान्ड होइनन् ? उनी आफूलाई ‘महानायिका वा सदाबहार नायिका’मध्ये के भन्न चाहन्छिन् ? यो बिषयमा अनलाइनखबरका लागि ‘विजय आवाजले करिश्मासँग गरेको छोटो कुराकानी यसप्रकार छः
अब, मलाई ‘महानायिका’को उपाधि दिइएको छ । यो पनि मैले स्विकार गरेँ । जतिबेला राजेश हमाललाई ‘महानायक’को उपाधि दिइएको थियो सोही समयमा कुनै एक जना नायिकालाई ‘महानायिका’को उपाधि दिनुपथ्र्यो । यसो हुँदा लैं-गिक समानता देखिन्थ्यो ।
मलाई यसमा वि’वाद र ब’हस गर्नु नै छैन । महिलालाई राम्रो हुने प्रकारको सन्देश जाओस् भन्ने मात्र मेरो चाहना हो ।